Sida loo muraayadda muraayadda Mac | waxaan ka imid mac
Sida loo muraayadda shaashadda Mac
Qolka Ignatius | | Kombiyuutarada Mac, Tababarada
Waxay u badan tahay, in marmar, aad la dhibtay cabbirka shaashadda Mac, markaad ka shaqaynayso mashruuc, oo aad tixgelisay suurtogalnimada iibso kormeeraha dibadda. In kasta oo ay run tahay in ay tahay xalka ugu dhaqsaha badan uguna fudud, haddii aan haysanno iPad-ka, waxaa laga yaabaa in aanan wax maalgashi ah sameynin.
Dheh miyaad raadinaysaa hababka si ay u muraayadda screen Mac ahMarka xigta, waxaan ku tusineynaa fursadaha ugu fiican ee hadda laga heli karo suuqa, labadaba ikhtiyaarrada waddaniga ah ee Apple na siiya iyo kuwa aan ku hayno annaga oo adeegsanayna qolo saddexaad oo sidaas oo kale ah.
2 Sidecar function
2.1 Qaababka Mac ee ku habboon Sidecar
2.2 Qaababka iPad-ka ee Wanaagsan Sidecar
2.3 Muraagi shaashadda Mac iPad-ka
2.4 Appka u dir iPadka
3 Isku xirka kormeeraha dibadda
4 Muuqaalka Luna
Hadaan rabno sii kordhi waxyaabaha lagu soo bandhigay shaashadda telefishanka kaas oo aan ku leenahay Apple TV ku xiran, waxaan ka samayn karnaa macOS High Sierra wixii ka dambeeya.
Nidaamku waa mid fudud sida gujinta muuqaalka hawada oo ku yaal bar menu-ka sare ee Mac-ka, oo dooro magaca Apple TV-ga uu telefishinku ku xiran yahay.
Laga bilaabo macOS Big Sur, oo leh dib u habeynta uu macOS helay, badhanka AirPlay wuxuu ku dhexjiraa Xarunta xakamaynta, hoos magaca Shaashadda shaashadda.
Marka xiriirka la sameeyo, AirPlay icon waxaa lagu tusi doonaa buluug. Si aan u damino xiriirka, waa in aan gujinaa isla astaantan ku taal bar menu-ka sare ama Xarunta Kontroolka - Shaashad nuqul ka sameysan oo guji Qalabka muujinaya shaashadda nuqulka ah ee qalabkayaga.
Markii la sii daayay macruufka 13 iyo macOS Catalina, shirkadda ku saleysan Cupertino ayaa soo bandhigtay muuqaalka Sidecar. Shaqadani waxay u ogolaataa Mac u fidin ama muraayada shaashadda Mac si iPad.
Waad ku mahadsan tahay shaqeyntan, isticmaaleyaasha haysta iPad Pro waxay la shaqeyn karaan Photoshop, Pixelmator ama tafatire sawir kasta Qalinka Apple.
Shardiga koowaad waa taas Labada qalabba waxaa maamula isla aqoonsiga Apple iyo in ay sidoo kale ku xiran yihiin isla shabakadda Wi-Fi, maadaama macluumaadka lagu wareejiyo si ka dhaqso badan isticmaalka xiriirka bluetooth. Waxa kale oo jirta ikhtiyaarka ah in lagu xidho labada qalab iyada oo loo marayo fiilada ku dallaca iPad-ka, ha noqoto hillaac ama USB-C.
Shuruudda labaad waa meesha aan ka heli karno xaddidaadyo badan, maadaama, nasiib daro, shaqadan Aan ku habboonayn dhammaan Mac-yada suuqa, si la mid ah ma aha dhammaan iPad-yada suuqa.
Qaababka Mac ee ku habboon Sidecar
Qaababka iPad-ka ee Wanaagsan Sidecar
Muraagi shaashadda Mac iPad-ka
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno, haddii aan buuxinno dhammaan shuruudaha aan kor ku soo sheegay, waa inaad tagtaa meesha ugu sareysa ee menu-ka oo guji AirPlay icon. Laga bilaabo macOS Big Sur, oo leh dib u habeynta uu macOS helay, badhanka AirPlay ayaa lagu dhex daray Xarunta xakamaynta, hoos magaca Shaashadda shaashadda.
Adigoo gujinaya doorashadan, si toos ah iPad-kayaga ayaa soo muuqan doona Aaladaha aan ka diri karno ama ka koobi karno calaamada Mac-gayada.
Xilligaas wixii ka dambeeya, Shaashadda iPadkayaga waxay bilaabi doontaa inay muujiso sawir la mid ah kan Mac-gayada. Xulashada qaabeynta shaashadda gudaheeda, waxaan dhaqaajin karnaa booska shaashadda iPadka si ay ula qabsato sida aan u dhignay miiskayaga.
Appka u dir iPadka
Haddii halkii aad isticmaali lahayd shaashadda iPad si aad u muraayadda shaashadda Mac, waxaan rabnaa u isticmaal sidii muuqaal fidsan, annaguna waan sameyn karnaa. Dhab ahaantii, waa ikhtiyaarka waddaniga ah ee la hawlgeliyo markaan hawlgelinno.
Sidan oo kale, waan awoodnaa soo dir apps si ay ugu muujiyaan iPadka kaliya ee ha ku tusin Mac. Si aan codsi ugu dirno iPad-ka, waa in aan riixnaa oo aan haynaa badhanka Maximize ilaa inta laga helayo ikhtiyaarka lagu hagaajinayo cabbirka iyo booska daaqadda oo ay weheliso ikhtiyaarka ah in codsiga loo diro iPad-ka.
Isku xirka kormeeraha dibadda
Xalka ugu dhaqsaha badan uguna fudud, haddii aan guriga ku haysano kormeere ama telefishin, waa in lagu xidho kormeeraha qalabkayaga iyada oo loo marayo deked. Muujinta Dekedda, HDMI ama USB-C iyadoo ku xiran qalabka aan ku xirno.
Ka dib, waa in aan galno Nidaamka doorbidida iyo qaybta Shaashada, dooro sida aan rabno in shaashadu u shaqeyso, adiga oo nuqul ka dhigaya waxa ku jira ama kordhinaysa cabbirka desktop-ka.
Muujinta Luna waa a dongle yar oo ku xidha our Mac oo aan kaga soo diri karno signalka Mac-ga una dirno iPad-ka. Si ka duwan shaqada Sidecar, oo leh Luna Display ma hayno wax xaddidaad ah oo qalab ah, taas oo ah, waxay ku habboon tahay Mac iyo iPad kasta oo suuqa ah.
Laakiin sidoo kale, Waxaan sidoo kale ku xidhi karnaa PC Windows ah, samaynta qalabkan doorasho fantastic ah in loo isticmaalo iPad sida screen labaad ee labada Mac iyo PC.
Sida haddii taasi aysan ku filneyn, Luna Display waan awoodnaa u beddelo Mac kasta ama Windows PC galay shaashad dibadda ah ee Mac our. Sida aan arki karno, Luna Display waa adduun suurtagal ah oo loogu talagalay isticmaaleyaasha aalad kasta, ha noqoto Apple ama Windows.
Bandhiga Luna wuxuu leeyahay qiimo sare, 129,99 DollarSi kastaba ha noqotee, wali waa ikhtiyaar aad uga jaban iibsashada iPad ama Mac cusub, iyadoo kuxiran aaladda labada aan noo ogolaaneynin inaan ka faa'iideysano shaqeynta Sidecar ee asalka ah.
Si aanu Luna Display uga shaqayno iPad-ka oo aanu markaa awood ugu yeelanno inaan u isticmaalno shaashada labaad, waa inaan soo deji app-ka soo socda.
Haddii waxa aan rabno waa in loo isticmaalo Mac ama Windows PC sidii shaashad labaad, Waa in aan booqano website-ka Atropad (abuuraha ee Luna Display) iyo soo deji software u dhigma.
Muujinta Luna waxaa lagu heli karaa noocyo USB-C (loogu talagalay Mac iyo Windows), Muuji Dekedda u Mac iyo HDMI Daaqadaha. Dhammaantood waxay leeyihiin qiimo isku mid ah.
Haddii aadan haysan Mac ama iPad ku habboon, xalka ugu jaban waa inaad isticmaasho app-ka Duet Display, codsi qiimahiisu yahay 19,99 euro Dukaanka App-ka oo u roga iPhone ama iPad-kayaga shaashad dheeri ah oo loogu talagalay Mac-kayaga.
Kaliya laakiin codsigan, waa kaas, haddii aan rabno in aan isticmaalno Qalinka Apple iPad-kayaga, waa inaan bixinaa kharash dheeraad ah oo lagu daray qiimihiisa. Si kastaba ha ahaatee, waa ikhtiyaar aad uga jaban iibsashada iPad cusub ama Mac cusub.
Kahor intaanan iibsan app-ka, waan tijaabin karnaa soo dejinta nooca la dhimay Codsigan iyada oo loo marayo isku xirka soo socda.
Marka aan ku rakibno codsiga iPad-keena, waxaan aadeynaa badhanka AirPlay ee ku yaal bar menu ama menu-ka shaashadda Duplicate haddii aan ku jirno macOS Big Sur ama ka dib iyo dooro magaca iPadkayaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Tababarada » Sida loo muraayadda shaashadda Mac
Apple wuxuu siidaayay daabacaad xadidan oo garaacday Buds Studio si loogu dabaaldego sanadka cusub ee Aasiya
Waxa horeba u jiray 25 dukaan oo Apple ah oo u xidhan Maraykanka COVID-XNUMX awgeed